Nhungamiro yekushandisa iyo Rolling Walker kana Wheeled Walker
kushandisa Kutenderera Walker
Kutenderera Walker ine mashandisiro mazhinji kunyangwe iwe uchipora kubva mukuvhiyiwa kana uchingova nedambudziko rekuwana nekuda kwezera kana mhasuru kushaya simba. Kutenderera Walker inobatsira nekubatsira yako chiyero uye kudzikisa huwandu hwekushushikana kuenda kumakumbo ako zvakanyanya.
Chero mamiriro ezvinhu anogona kukonzera dzungu kana kuneta anogona kutonyanya kutyisa nekuumburuka Walker nekuti panogara paine pfungwa yekuchengeteka sezvo uchigona kugara uchisvika kumberi wobata yako Walker kana iwe ukazombofa wakarasikirwa nepakati kana kugumburwa.
kushandisa a rollator kana Wiricheya Walker
tikaisa vanofamba hazvisi zvekungobatsira nezvebhalansi zvakadaro. Vanoda kusvika makumi mashanu muzana yevanhu vanoshandisa kutenderera vanofamba kutsigirwa. Kana uri kushandisa dzako Walker sekutsigira, famba nemaoko ako kumberi kwemuviri wako, uchisunda iyo Walker kumberi sezvaunoswedera padyo nayo. Rangarira kusatsamira pa Walker sezvo hakusi iko kushandiswa kwekushandisa kwechigadzirwa.
apo kushandisa a Walker kutsigira huremu hwako, zvakanakisa kuchengeta yako Walker zvakadaro paunenge uchienda kumberi. Izvi zvinobatsira nekudzikama uye zvinodzivirira kurasikirwa kwechiyero. Nguva dzose chengeta musana wako wakamira kana uchisunda yako Walker nekuti izvi zvinobatsira kudzivirira iyo Walker kubva pakuenda kure zvakanyanya pamberi pako. Uyezve ita chokwadi chekusashandisa yako Walker pamatanho. vanofamba zvakagadzirirwa nzvimbo dzakapetana chete.
kushandisa Kutenderera Walker Ndichiri Kukwira Masitepisi
Kana iwe uchida kukwira nekudzika masitepisi, edza kuchinjira kune tsvimbo nekuda kwechikonzero chakanangana.
Edza kusakurumidza kana kutora matanho makuru, kunyanya kana iwe uchikosha remara uye uine dambudziko nepakati. Kuumburuka kwako Walker inofanirwa kuve yakasarudzwa uye kugadziridzwa kune yako urefu. Inofanirwa kuve yakakwira zvakakwana kuti ikubvumire iwe kusimuka usingave uri kure zvakanyanya kubva kune vanobata.
Magokora anofanirwa kukombama anenge madhigirii makumi maviri kubvumidza kufamba chaiko uye kutendeuka.